प्रधानमन्त्रि द्वारा एक मिनेटमा नै ए’क्सन लिने प्रस्ताव – Paluwa Khabar
प्रधानमन्त्रि द्वारा एक मिनेटमा नै ए’क्सन लिने प्रस्ताव
कार्तिक १८, २०७७ मंगलबार 54
नेकपाकाे बालुवाटारमा बोलाइएको प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट नेताहरूको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई हटाउने र कर्णाली प्रदेश सरकारलाई बर्खास्त गरी भारतमा झैं प्रदेश प्रमुख (राज्यपाल) मार्फत रास्ट्रपति शासन लगाउने प्रस्ताव एक्कासी राख्नुभएको समाचार छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफूबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि लगत्तै त्यहाँका सचेतक गुलावजङ्ग शाहलाई हटाएर आफू पक्षधर सीता नेपालीलाई जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए ।
संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दलको बैठकको निर्णयलगायतका विषयमा प्रमुख सचेतकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कथमकदाचित आफूबिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश भएमा गुरूङ्गले त्यसको सहजिकरण गर्नसक्ने सम्भावना देखेपछि उनलाई हटाउने खेल खेलिएको बताइन्छ । प्रमुख सचेतक राख्ने वा हटाउने भन्ने विषय संसदीय दलका नेताको विशेषाधिकारभित्र पर्दछ ।
यसबीच संसदीय दलमा स्पष्ट बहुमत पुर्याउन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको अनेकौं पटकको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । बहुमतको लागि सँधै पाँचदेखि दश जनाको अभाव भएपछि बालुवाटार प्रमुख सचेतक हटाउने सजिलो खेलमा लागेको अर्थ लगाइएको छ । उता,कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशनपछि अन्तिम समयमा रोकिएको बताइएको छ ।
त्यही शैलीमा र त्यसैको जवाफ दिने गरी प्रधानमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले यतापनि प्रमुख सचेतक हटाउन खोज्नुभएको अनुमान छ । कर्णालीमा पहिले अविश्वास प्रस्तावको तयारी र पछि सचेतक हटाउने कार्य भएको थियो भने यता पहिले सचेतक हटाउने तयारी र पछि अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना त्यत्तिकै रहेको घटनाक्रमले पुुष्टि गर्दै गइरहेको छ ।
आजै साँझ खुमलटारमा छ जना सचिवालय सदस्यहरूको गहन छलफल भएको छ । बाँकी तीन जनामध्ये एक जना बालुवाटार र खुमलटारको बीचमा रहेको उनीहरूको बुझाई हो । खुमलटारको छलफलले पार्टी एकताको लागि अन्तिम पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । उक्त पहलको जिम्मेवारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई नै दिइएको छ ।
आजै बिहान बालुवाटारमा बसेको अर्को अर्जेण्ट मिटिङ र यसअघि धेरै वटा खास खास छलफलमा समेत महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पूर्ण बिश्वास नगरिएको घटनालाई पनि धेरैले अचम्म मानेका छन् । हिजो प्रत्यक्ष भेटघाट गरेपनि खुलस्त नहुनुभएका दुई जना अध्यक्षबीच आज एकैछिन फोन वार्ता भएको थियो । आजको फोन वार्तामा पनि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षले अर्को पक्षले पार्टीको बैठक राखेर कुनै निर्णय लिएमा आफूले एक मीनेटमै ‘एक्सन लिने’ बताउनुभएको बुझिएको छ ।
‘तपाईंले नचिताएको र नसोचेको कुरो म एक मिनेटमा गरेर देखाइदिनेछु । पार्टी फुटाउने भएपनि फुटाऔं । एक ठाउँमा बसेर साध्य हुने देखिएन । अब तपाईंले तपाईंको बाटो रोज्नुहोस्, म पनि आफ्नो बाटो लाग्छु ।
आजको फोनवार्तामा सचिवालयको बैठक बोलाउनेवारे दुईजना अध्यक्षबीच तँ तँ र म मबाहेक सबै खालको भनाभन भएको सुरक्षा श्रोत बताउँछ । त्यसबखत प्रचण्डप्रति कडा हुँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ‘तपाईंले नचिताएको र नसोचेको कुरो म एक मिनेटमा गरेर देखाइदिनेछु । पार्टी फुटाउने भएपनि फुटाऔं । एक ठाउँमा बसेर साध्य हुने देखिएन । अब तपाईंले तपाईंको बाटो रोज्नुहोस्, म पनि आफ्नो बाटो लाग्छु । सल्लाहमै पार्टी फुटाऔं,पार्टी फुटाउनुको अन्तिम विकल्पबाहेक केही छैन । एकैसाथ जान सकिने अवस्था देखिएन । तपाईंहरूले बहुमतको आडमा सचिवालयको बैठक बोलाउने तयारी गर्ने हो भने म पनि देखाइदिनेछु ।’ जन आस्थाले खवर प्रकाशित गरेकाे छ ।
Prevभुमिहिनकाे समस्यामा सरकार उदासिन
Nextब्लडबैंकलाई सहयाेग गर्दै शसस्त्र प्रहरि
प्रधानमन्त्रि र “र अ” प्रमुखकाे भेट सार्वजनिक गर्न बिप्लवकाे माग
लगातार बढेको सुनको मुल्य, आज भने पत्याउनै नसकिने गरि घट्यो
अन्तत : लोकबहादुरको बुबा पनी मिलेका रहेछन ६ जनालाई सि’ध्याउन, दाजुको ज्यान लिएर बसेका थिए क्रिया(भिडियो)
४.	सांसदको दसैँ भत्ता काटिएपछि रामनारायण बिडारीको आक्रोश : के सबै सांसद विनोद चौधरी हुन् ? (50)
६.	दसैंको मुखमा श्रीमान मा र्ने श्रीमती सहित ४ जना हि रासतमा अरु को को रहेछन् ह त्यारा (भिडियो हेर्नुस्) (45)